နီပေါနိုင်ငံက ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ပြန်လည်ထုတ်ပေး - Xinhua News Agency
ခတ္တမန္ဒူ၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နီပေါနိုင်ငံက ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်နိုးထလာစေရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံထားသော ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုကို စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က ပြန်လည်စတင်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ချက်ချင်းအသက်ဝင်မည့် ခရီးသွားအကြံပြုချက်တွင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံသို့ မလာရောက်မီ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးကြောင်း အထောက်အထား ပြသပြီးနောက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ရရှိနိုင်ကြောင်း နီပေါနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွားနှင့် မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားထားသည်။
ပြည်ပဧည့်သည်များအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံသို့ လေယာဉ်နှင့် လိုက်ပါခြင်း၊ နီပေါနိုင်ငံတွင် ဟိုတယ်ခန်းကြိုတင်မှာယူကြောင်းအထောက်အထား၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့် ခြေလျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းအတွက် နီပေါနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့်နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပါက နီပေါအာဏာပိုင်များထံမှ ထုတ်ပေးသောခွင့်ပြုချက်များ စသည်တို့မလုပ်ဆောင်မီ ၇၂ နာရီအတွင်း polymerase chain reaction စစ်ဆေးမှုများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါမရှိကြောင်း စစ်ဆေးထားသည့် အထောက်အထားများ ထုတ်ယူထားသင့်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များသည် နီပေါနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် antigen စစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါက သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်မှာ နီပေါနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် မတ်လက COVID-19 ပထမလှိုင်းကျရောက်ခဲ့ချိန် ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာကို ပထမဆုံး ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“ဆိုက်ရောက်ဗီဇပြန်လည်ထုတ်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကပ်ရောဂါကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော ခရီးသွားကဏ္ဍအား ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး Laxmi Kumari Basnet က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
“တစ်နည်းပြောရရင် နီပေါမှာ COVID-19 ရောဂါဟာ မကြာသေးမီရက်များအတွင်း လျော့ကျနေခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်းတွေတောင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဆက်ပြီးပိတ်ထားတာက ဘယ်တရားပါ့မလဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
နီပေါနိုင်ငံတွင် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၉၄၁ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁၃ ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၇၈၈,၇၆၉ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁၁,၀၇၂ ဦးရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစောပိုင်းက နီပေါနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများ၊ သံတမန်များနှင့် နီပေါအာဏာပိုင်များမှ ထောက်ခံချက်ပေးထားသူများကိုသာ အရေးပေါ်အခြေအနေရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း နီပေါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jhanka Nath Dhakal က ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရီးသွားအကြံပြုချက်အသစ်အရ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းမရှိသော နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားလာရန် နီပေါမစ်ရှင်အဖွဲ့ထံမှ ဗီဇာရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဟိုတယ်များတွင် ၁၀ ရက်ကြာ ကွာရန်တင်း (quarantine) နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
KATHMANDU, Sept. 23 (Xinhua) — Nepal on Thursday resumed the on-arrival visa service to foreign tourists fully vaccinated against COVID-19 withaview to reviving the tourism sector.
Inatravel advisory to be effective immediately, Nepal’s Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation said that foreign tourists would be able to receive on-arrival visas after producing documents showing they are fully inoculated against the coronavirus at least 14 days prior to their arrival in Nepal.
“The decision to resume on-arrival visas was taken to rescue the tourism sector which has been devastated by the pandemic,” Laxmi Kumari Basnet, joint secretary at the ministry, told Xinhua. “On the other hand, COVID-19 cases in Nepal have also been decreasing in recent days and even schools are being reopened. So, it would not be justified to keep the tourism sector closed continuously.”
Earlier, only foreigners of Nepali origin, diplomats and those recommended by Nepali authorities were eligible for on-arrival visas for emergency purposes, according to Jhanka Nath Dhakal, spokesperson for Nepal’s Department of Immigration.
The photo shows tourists take selfie on the trekking route of Himalayas in Solukhumbu, Nepal, Nov. 20, 2016. (Xinhua/Sunil Sharma)
နီပေါနိုင်ငံတွင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု လျှော့ချရန် တစ်ပတ်လျှင် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ၂ ရက်သတ်မှတ်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံ ဟော့ကိုင်းဒိုးကျွန်း၌ ခရီးသွားလှေပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၁၀ ဦး သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြု